यस गोपनीयता नीति ("नीति") वेबसाइट कसरी सञ्चालक वर्णन ("वेबसाइट संचालक", "हामी", "हामीलाई" वा "हाम्रो") सङ्कलन, सुरक्षा र व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी प्रयोग गर्दछ ("व्यक्तिगत जानकारी") तपाईं ("प्रयोगकर्ता", "तपाईं" वा "आफ्नो") may provide on the https://bestappsformobiles.com website and any of its products or services (सामूहिक, "वेबसाइट" वा "सेवा"). यो पनि आफ्नो व्यक्तिगत सूचना हाम्रो प्रयोगको सन्दर्भमा र तपाईंले पहुँच र यो जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ कसरी विकल्प उपलब्ध वर्णन. यो नीति हामीले स्वामित्व छैन भनेर कम्पनीहरु वा नियन्त्रण को अभ्यासहरू लागू हुँदैन, वा व्यक्तिहरूलाई हामी रोजगार कि छैन वा व्यवस्थापन.
हामी प्राप्त र तपाईं वेबसाइट मा कुनै पनि अनलाइन फारम भर्न जब तपाईं जानिजानि हामीलाई प्रदान कुनै पनि जानकारी भण्डारण. तपाईंले केही जानकारी हामीलाई प्रदान गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं त वेबसाइट विशेषताहरूले केही फाइदा लिन सक्षम नहुन सक्छ. अनिवार्य छ के जानकारी बारेमा अनिश्चित छन् प्रयोगकर्ता हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ.
गैर-व्यक्तिगत जानकारी को संग्रह
आफ्नो ब्राउजर पठाउँछ कि तपाईं वेबसाइट भ्रमण गर्दा हाम्रो सर्भर स्वतः जानकारी रेकर्ड. यो डेटा तपाईँको यन्त्रको IP ठेगाना रूपमा जानकारी समावेश हुन सक्छ, ब्राउजर प्रकार र संस्करण, अपरेटिङ सिस्टम प्रकार र संस्करण, भाषा प्राथमिकताहरू वा तपाईं अघि भ्रमण थिए वेबपेज हाम्रो वेबसाइट आए, तपाईंले भ्रमण गर्ने हाम्रो वेबसाइट पृष्ठ, ती पृष्ठहरूमा खर्च समय, तपाईं हाम्रो वेबसाइट मा खोज्ने जानकारी, पहुँच समय र मिति, र अन्य तथ्याङ्क.
सङ्कलन जानकारी प्रयोग र प्रशोधन
हामी तपाईंबाट सङ्कलन जानकारी को कुनै पनि हाम्रो वेबसाइट सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; चालु र हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरु सञ्चालन. संकलित गैर-व्यक्तिगत जानकारी दुरुपयोग को क्षमता अवस्थामा पहिचान र वेबसाइट प्रयोग सन्दर्भमा तथ्याङ्क जानकारी स्थापित गर्न मात्र प्रयोग गरिन्छ. यो तथ्याङ्क जानकारी अन्यथा सिस्टम को कुनै पनि विशेष प्रयोगकर्ता पहिचान भनेर यस्तो तरिकाले थपिन छैन.
निम्न मध्ये एक लागू यदि हामी तपाईंलाई सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना प्रक्रिया हुन सक्छ: (म) तपाईंले एक वा बढी विशिष्ट उद्देश्यका लागि आफ्नो सहमति दिएको छ. केही legislations अन्तर्गत हामी जानकारी प्रक्रिया तपाईं यस्तो प्रक्रिया आपत्ति सम्म अनुमति कि सक्छ टिप्पणी गर्न (बाहिर अप्ट द्वारा), सहमति निम्न कानुनी तल आधारमा कुनै पनि अन्य भरोसा वा बिना. यो, तथापि, लागू हुँदैन, व्यक्तिगत सूचना को प्रक्रिया जब युरोपेली डाटा सुरक्षा व्यवस्था विषय हो; (द्वितीय) जानकारी को प्रावधान र / वा कुनै पनि पूर्व-करार दायित्व तत्संबंधी लागि तपाईंसँग एउटा सम्झौता को प्रदर्शन को लागि आवश्यक छ; (द्वितीय) प्रशोधन तपाईं विषय हो कुन कानुनी दायित्व अनुपालनको लागि आवश्यक छ; (चतुर्थ) प्रशोधन सार्वजनिक चासो वा हामीलाई निहित आधिकारिक अधिकार को व्यायाम मा बाहिर भएको एक कार्य सम्बन्धित छ; (v) प्रशोधन हामीलाई द्वारा अपनाए पनि वैध चासो को उद्देश्यका लागि वा तेस्रो पक्ष द्वारा आवश्यक छ. कुनै पनि मामला मा, हामी प्रक्रिया लागू विशिष्ट कानुनी आधार स्पष्ट गर्न खुसी हुनेछन्, र विशेष कि व्यक्तिगत डाटा को प्रावधान एक वैधानिक वा करार आवश्यकता छ, वा सम्झौता प्रवेश गर्न आवश्यक एक आवश्यकता.
स्थानान्तरण जानकारी र भण्डारण
आफ्नो स्थान आधारमा, डाटा स्थानान्तरण तपाईंको आफ्नै भन्दा अन्य देश मा आफ्नो जानकारी स्थानान्तरणका र भण्डारण हुनसक्छ. तपाईं युरोपेली संघ बाहिर वा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून द्वारा शासित वा दुई वा बढी देशहरू द्वारा स्थापित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कानुनी जानकारी स्थानान्तरण को एक देश आधार सिक्न हकदार छन्, संयुक्त राष्ट्र जस्ता, र हामीलाई लगियो सुरक्षा उपाय तपाईंको जानकारी सुरक्षित राख्ने. कुनै पनि स्थानान्तरण ठाउँ लिन्छ भने, तपाईं यो कागजातको सान्दर्भिक खण्डहरू जाँच गरेर थप पत्ता वा सम्पर्क खण्डमा प्रदान जानकारी प्रयोग गरेर हामीलाई साथ सोध्नु गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं हामीलाई प्रशोधन आफ्नो जानकारी सन्दर्भमा केही अधिकार अभ्यास हुन सक्छ. खासमा, तपाईं निम्न गर्न सही छ: (म) तपाईं जहाँ तपाईं पहिला तपाईंको जानकारी को प्रक्रिया गर्न आफ्नो सहमति दिएको छ सहमति फिर्ता गर्ने अधिकार छ; (द्वितीय) तपाईं प्रक्रिया सहमति भन्दा अन्य कानुनी आधारमा बाहिर छ भने आफ्नो जानकारी को प्रक्रिया आपत्ति गर्ने अधिकार छ; (III) तपाईं जानकारी हामीलाई प्रशोधन भइरहेको यदि सिक्न सही छ, प्रक्रिया केही पक्षहरू सन्दर्भमा खुलासा प्राप्त र जानकारी भइरहेको प्रक्रिया प्रतिलिपि प्राप्त; (चतुर्थ) तपाईं आफ्नो जानकारी को शुद्धता प्रमाणित गर्न र यसलाई अद्यावधिक लागि वा सही सोध्न सही छ; (v) तपाईं सही छ, केही परिस्थितिमा, तपाईंको जानकारी को प्रक्रिया प्रतिबन्ध गर्न, जो मामला मा, हामी यसलाई भण्डारण भन्दा अन्य कुनै पनि उद्देश्य लागि आफ्नो जानकारी प्रक्रिया छैन; (हामी) तपाईं सही छ, केही परिस्थितिमा, हामीलाई तपाईंको व्यक्तिगत सूचना को मेटाइ प्राप्त गर्न; (VII) तपाईं एक संरचित तपाईंको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार छ, सामान्यतः प्रयोग र पठनीय मिसिन ढाँचा र, यदि प्राविधिक सम्भाव्य, यसलाई कुनै पनि रोकावट बिना अर्को नियन्त्रक गर्न प्रसारित गरेका. यो प्रावधान लागू आफ्नो जानकारी स्वचालित हालतमा प्रक्रिया र प्रक्रिया आफ्नो सहमति आधारित छ भन्ने प्रदान गरिएको छ, एक सम्झौता मा जो तपाईं को वा तत्संबंधी पूर्व-करार दायित्व मा भाग हो.
प्रशोधन आपत्ति गर्ने अधिकार
जहाँ व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक रुचिको लागि प्रक्रिया छ, हामीलाई द्वारा अपनाए हामीलाई वा वैध चासो को उद्देश्यका लागि निहित एउटा सरकारी अख्तियार को व्यायाम मा, तपाईं आपत्ति सफाइ आफ्नो विशेष स्थिति सम्बन्धित एक जमीन प्रदान गरेर यस्तो प्रक्रिया आपत्ति हुन सक्छ. तपाईं थाहा हुनुपर्छ, तथापि, आफ्नो व्यक्तिगत सूचना प्रत्यक्ष मार्केटिङ उद्देश्यका लागि प्रक्रिया हुनुपर्छ, तपाईं कुनै पनि औचित्य प्रदान बिना कुनै पनि समयमा त्यो प्रक्रिया आपत्ति सक्नुहुन्छ. सिक्नु, हामी प्रत्यक्ष मार्केटिङ उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत सूचना प्रशोधन कि, तपाईं यो कागजातको सान्दर्भिक खण्डहरू उल्लेख सक्छ.
यी अधिकार कसरी खेती
प्रयोगकर्ता अधिकार अभ्यास गर्ने कुनै पनि अनुरोध यो कागजात प्रदान सम्पर्क विवरण मार्फत मालिक निर्देशित गर्न सकिन्छ. यी अनुरोध नि: शुल्क exercised गर्न सकिन्छ र मालिक द्वारा एक महिना भित्र रूपमा प्रारम्भिक सकेसम्म र सधैं सम्बोधन गरिनेछ.
बच्चाहरु को गोपनीयता
हामी जानिजानि को उमेर मुनिका बच्चाहरु कुनै पनि व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन छैन 13. तपाईं को उमेर अन्तर्गत छन् भने 13, कृपया हाम्रो वेबसाइट वा सेवा मार्फत कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी पेश छैन. हामी आमाबाबु र कानुनी संरक्षक र छोराछोरीलाई इन्टरनेट प्रयोगको अनुगमन गर्न र आफ्नो अनुमति बिना हाम्रो वेबसाइट वा सेवा मार्फत व्यक्तिगत सूचना प्रदान गर्न कहिल्यै छोराछोरीलाई निर्देश द्वारा लागू यो नीति मदत गर्न प्रोत्साहन. के तपाईं कारण छ भने विश्वास गर्न भनेर उमेर अन्तर्गत एक बच्चा 13 हाम्रो वेबसाइट वा सेवा मार्फत व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गरेको छ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
हामी अनलाइन विज्ञापनहरू प्रदर्शन हुन सक्छ र हामी एकत्रित र गैर-पहिचान हाम्रो ग्राहकहरु बारेमा हामी दर्ता प्रक्रिया मार्फत वा केही विज्ञापनदाताहरु अनलाइन सर्वेक्षण र पदोन्नति मार्फत सङ्कलन जानकारी साझेदारी गर्न सक्छन्. हामी विज्ञापनदाताहरु संग व्यक्तिगत ग्राहकहरु बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान जानकारी साझेदारी नगर्नुहोस्. केही उदाहरणहरू मा, हामी अभिप्रेत दर्शक बनाइएको विज्ञापन प्रदान गर्न यो एकत्रित र गैर-पहिचान जानकारी प्रयोग गर्न सक्छ.
हाम्रो वेबसाइट स्वामित्व वा नियन्त्रण हामीलाई द्वारा अन्य वेबसाइटहरु लिंक समावेश. कृपया हामी यस्तो अन्य वेबसाइट वा तेस्रो-पक्षहरूका गोपनीयता अभ्यासहरू लागि जिम्मेवार छैनन् भनेर सजग हुन. तपाईं हाम्रो वेबसाइट छोडेर प्रत्येक गोपनीयता बयान र व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन गर्न सक्छन् कि हरेक वेबसाइट पढ्न जब हामी तपाईंलाई थाह हुन प्रोत्साहन.
हामी सुरक्षित जानकारी एक नियन्त्रित मा कम्प्युटर सर्भर मा प्रदान, सुरक्षित वातावरण, अनधिकृत पहुँच सुरक्षित, प्रयोग, वा खुलासा. हामी व्यावहारिक प्रशासनिक कायम, प्राविधिक, र एक प्रयास मा भौतिक सुरक्षा अनधिकृत पहुँच सुरक्षित गर्न, प्रयोग, परिमार्जन, यसको नियन्त्रण र हिरासत मा व्यक्तिगत सूचना को र प्रकटीकरण. तथापि, इन्टरनेट वा वायरलेस नेटवर्कमा कुनै डाटा प्रसारण प्रत्याभूति हुन सक्दैन. त्यसैले, हामी आफ्नो व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा गर्न प्रयास गर्दा, तपाईं भनी स्वीकार (म) त्यहाँ इन्टरनेट को सुरक्षा र गोपनीयता सीमितता जो हाम्रो नियन्त्रणमा छन् छन्; (द्वितीय) सुरक्षा, निष्ठा, र कुनै पनि को गोपनीयता र सबै जानकारी र डाटा तपाईं र हाम्रो वेबसाइट बीच साटासाट प्रत्याभूति हुन सक्दैन; र (III) कुनै पनि जानकारी र डाटा हेर्न वा ट्रान्जिट मा संग बिग्रेका हुन सक्छ तेस्रो-पक्ष द्वारा, सबै भन्दा राम्रो प्रयासको बावजुद.
घटनाको हामी वेबसाइट सुरक्षा सम्झौता गरिएको छ वा प्रयोगकर्ताहरूका व्यक्तिगत सूचना बाह्य गतिविधिको फलस्वरूप असम्बन्धित तेस्रो-पार्टीहरूलाई disclosed गरिएको छ सजग बन्न, लगायत, तर सीमित छैन, सुरक्षा आक्रमण वा ठगी, हामी reasonably उपयुक्त उपाय लिन अधिकार, लगायत, तर सीमित छैन, छानबिन र रिपोर्ट, साथै कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु संग गर्न सूचना र सहयोग रूपमा. डाटा उल्लङ्घन घटनाको, हामी त्यहाँ एक प्रयोगकर्ता गर्न हानि को उचित उल्लंघन को फलस्वरूप जोखिम छ भन्ने विश्वास गर्छन् भने प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सूचित गर्न उचित प्रयासमा गर्नेछ वा यदि सूचना अन्यथा व्यवस्था आवश्यक छ. हामीले त्यसो गर्दा हामी वेबसाइट मा एक सूचना पोस्ट हुनेछ.
परिवर्तन र परिमार्जन
हामी कुनै पनि समय मा वेबसाइट वा सेवा सम्बन्धी यस गोपनीयता नीति परिमार्जन गर्न अधिकार, वेबसाइट मा यो नीति एउटा अद्यावधिक संस्करण को पोस्ट मा प्रभावकारी. जब हामी यस पृष्ठको तल अद्यावधिक मिति संशोधन हुनेछ गर्छन्. जारी वेबसाइटको कुनै पनि परिवर्तन पछि प्रयोग यस्तो परिवर्तन गर्न आफ्नो सहमति गठन गर्नेछ.
यो नीति को स्वीकृति
तपाईं यो नीति पढ्न र यसका सबै नियम र सर्तहरू सहमत छु भनी स्वीकार. वेबसाइट वा यसको सेवा प्रयोग गरेर तपाईंले यो नीति बाँधिएका गर्न सहमत. तपाईं यो नीति सर्तहरू पालन गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रयोग वा वेबसाइट र यसको सेवा पहुँच गर्न अधिकार छैन.
तपाईं यो नीति बारे कुनै प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस. [email protected]
यो कागजात अन्तिम मई मा अद्यावधिक गरिएको थियो 24, 2018